Ny Oukitel WP19 vaovao dia tonga amin'ny hazavana, fomba hafa mahatohitra | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 18/06/2022 16:22 | General, About us
Oukitel dia niasa mafy nandritra ny fotoana ela mba hanolotra safidy hafa amin'ny tsena izay tsy manana sakafo midadasika azo isafidianana, miresaka momba ny fitaovana "mahery vaika" isika na novokarina manokana miaraka amin'ny fikasana hanolotra toetra mahatohitra ambony noho izay ampiasainay. amin'ny finday. Tamin'ny volana Jona dia tsy nijanona ny indostria, ary amin'izany fomba izany dia mitombo ny lisitry ny zava-baovao.
Ny Oukitel WP19 Izy io dia fitaovana mahery vaika izay aseho miaraka amina endri-javatra mahaliana sasany amin'ny vidiny midina. Holazainay aminao ny zava-baovao momba ity fitaovana Oukitel vaovao ity sy ny fomba hahazoanao azy amin'ny vidiny tsara kokoa.
1 Fahaleovan-tena lehibe
2 Fakan-tsary 64MP sy fahitana amin'ny alina
3 Ecran sy fitaovana hifanaraka
4 Tolotra fampidirana manokana
Ity fitaovana ity, ahoana raha tsy izany, manana bateria 21.000 mAh, tena hatezerana raha ampitahaina amin'ireo safidy hafa amin'ny fifaninanana. Noho izany, Lasa iray amin'ireo finday manana bateria lehibe indrindra eny an-tsena izy io. Izy io dia natao manokana ho an'ireo mpampiasa mandany andro lava tsy ao an-trano sy lavitra ny charger.
Fanampin'izany, manana fiasa haingana izy io, ahoana no mety hitranga raha tsy izany, Miaraka amin'ny herin'ny fampidirana 33W, izay ahafahanao mamaly 0% ka hatramin'ny 80% ao anatin'ny 3 ora monja. Mety ho toa tsy dia be loatra aminao izany, fa raha raisinao fa ny bateria dia 21.000 mAh, telo heny noho ny iPhone mahazatra, miova ny zava-drehetra.
Tombontsoa iray hafa ny azy 21.000 mAh no tena marina fa ny seranan-tsambo USB-C dia OTG, izany hoe ahafahantsika mamadika ireo fitaovana rehetra ampifandraisintsika amin'ny Oukitel WP19. Raha fintinina, araka ny kajikajy ankapobeny, ny Oukitel WP19 dia mety haharitra hatramin'ny herinandro amin'ny fiampangana iray feno.
Fakan-tsary 64MP sy fahitana amin'ny alina
Ity Oukitel WP19 Izy io koa dia ahafahanao maka sary ireo fotoana fandosirana, ho an'ity tendrombohitra sensor ity Samsung S5K manana resolution 64MP, miaraka amin'ny fakan-tsary Sony night vision, modely IMX350 miaraka amin'ny resolution 20MP, ary farany, sensor fahatelo hisambotra ireo tsipiriany izay tsy hita afa-tsy avy amin'ny tena akaiky, isika miresaka tsy ny sensor macro 2MP.
Noho izany, ny fitaovana dia mamela ny fakana sary tsara na inona na inona toe-javatra ankapobeny amin'ny resaka fandrafetana sy famirapiratana. Fakan-tsary tena versatile vonona hamaly ny filana ivelany rehetra.
Ecran sy fitaovana hifanaraka
Ny efijery dia tsy maintsy manaraka ny sisa amin'ny toetran'ny fitaovana, ary amin'ity tranga ity dia ny Oukitel WP19 dia mitaingina tontonana IPS LCD 6,78-mirefy ary famaha Full HD + izay ahafahanao mankafy ny fotoana rehetra amin'ny fomba tsara indrindra. Mihoatra ny fenitra ny tahan'ny famelombelomana azy, noho izany dia mijoro amin'ny 90Hz, miovaova araka ny filantsika mba tsy hanimba ny fahaleovantenany.
Mba hamindra ny zava-drehetra dia manana ny processeur ny Oukitel WP19 MediaTek Helio G95 miaraka amin'ny processeur data finday 4G. Izy io dia miaraka amin'ny 8GB an'ny RAM ary 256GB ny fitahirizana fitahirizana, izay mampanantena traikefa milamina amin'ny fitaovana izay, araka ny efa voalazantsika, dia mihoatra noho ny asa.
Amin'ny maha-telefaonina tena mahatohitra azy dia manana mari-pankasitrahana izy IP68, IP69 ary kilasy miaramila MIL-STD-810H, noho izany dia aseho manokana ho an'ny tontolo iainana velona, ​​mahatohitra rano, vovoka ary indrindra ny fianjerana.
Izany dia tsy manakana ny fitaovana tsy hanana andiana asa mahaliana toy ny sensor fanondro sy ny famantarana ny tarehy, miaraka amin'ny NFC mba hahafahana manao fifampiraharahana sy fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny Google Play, Anisan'ireo asa hafa.
Tolotra fampidirana manokana
Ny Oukitel WP19 dia hanana voalohany eran-tany eo anelanelan'ny 27 jona sy 1 jolay miaraka amin'ny vidiny manokana Aliexpress. Ny vidiny mahazatra dia $ 599,99, na izany aza, mandritra ny voalohany eran-tany dia ho afaka hividy izany amin'ny $299,99 fotsiny ianao, ankoatra ny tapakila fihenam-bidy $ 30 ho an'ny mpampiasa haingana kokoa. Izany dia hiteraka vidiny tsy mampino amin'ny $269,99 fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ny Oukitel WP19 vaovao dia tonga amin'ny hazavana, fomba hafa mahatohitra
Ny boom VPN: nahoana no zava-dehibe ny fampiasana azy ireo?